Roobka ororaafka: astaamaha, asalka iyo muhiimadda | Saadaasha Shabakadda
Waxaa jira noocyo badan oo roob ah iyadoo kuxiran asalka iyo astaamaha mid kasta. Mid ka mid ah ayaa ah roob ororax leh. Waxay dhacdaa markii hawada qoyan laga riixo badda oo loo maro buur oo ay marto jaranjaro kor u socota. Aaggan waa xudunta isdhexgalka u dhexeeya dusha sare ee dhulka iyo jawiga.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato roobka kulaylka leh, sifooyinka uu leeyahay iyo sida ay muhiimka u tahay.
2 Abuuritaanka roobka afka ka baxa
3 Meelaha ay roobabku ka dhacaan
Roobka ororaafka ahi wuxuu dhacaa marka hawo qoyan oo ka timaadda badda ay ka gudubto buur kor u sii socota. Hawada waxaa lagu soo oogay uumiga biyaha iyo waxay ku socotaa hawo qabow oo joog sareysa. Waa halkaan oo ay ka daadiso dhammaan roobka ka dibna ay ka soo degto buurta iyada oo leh heer kul ka weyn kan ay kor u kacday.
Roobabkani ma aha oo kaliya muhiim u ah ilaalinta nidaamka deegaanka iyo kheyraadkaas, laakiin sidoo kale waxay muhiim u tahay qaar ka mid ah qaybaha jirka ee nidaamka Dunida. Webiyada badankood waxay ka dhashaan buuraha dhaadheer waxaana quudiya roobabka ororreyga. Daadadka, gogosha iyo qulqulka roobka waxaa inta badan saameeya xooga uu leeyahay roobka cimilada leh. Meelaha leh buuro dhaadheer sida caadiga ah waxyeelo weyn soo saartaa maadaama ay roobku u fududahay inuu dhaqo qashinka.
Abuuritaanka roobka afka ka baxa
Waxaan eegeynaa maxay yihiin astaamaha ay tahay inuu deegaanku yeesho si roobka macaan loo soo saaro. Waxaan u qaadaneynaa in cufnaanta hawada ee uumiga biyaha badan uu ka yimaado badda. Markuu dhaqaaqayo ayuu buur ku ordayaa. Markay hawadu soo kacdo waxay bilaabmaysaa qabow. Markaa ayaa daruuraha afku ay samaysmaan oo u adeegaan il roobab. Daruuraha waxaa sameeya uumiga uumiga biyaha waxaana daruuro cumulus ah sameysmaya. Daruuraha oromada waxay soo saari karaan roob iyo duufaanno koronto oo xoog leh.
Dhammaan waxay kuxirantahay qadarka uumiga biyaha ee kacaya iyo kala duwanaanta heerkulka joogga iyo dhulka dushiisa. Markay sii weynaato kala duwanaanta heerkulka, ayaa si dhakhso ah uumiga biyuhu u ururayaa uguna sii yaraanayaa wuxuu ku noqonayaa daruurahaas. Marka socodka hawadu hakad ku yimaado joogitaanka buur ama buur waxaa lagu qasbay inay fuusho. Isbeddeladan xagga jihada hawadu waa waxa sababa isbeddelada hababka saadaasha hawada.
Sare u kaca hawadda qoyan ee dhulka kuma filna roobka inay dhacaan. Tani waxay badanaa dhacdaa markii durba ay dabeylo ka jiraan deegaanka. Hawo qoyan oo keliya ma aha inay kacdo, laakiin heerkulku waa inuu ahaadaa mid qabow sidii si loo soo saaro uumis deg deg ah iyo sameynta daruuro ororax leh. Dhinaca kale, markay hawadu soo degto hal mar markay da’ayaan, daruurta iyo roobku waxay ku dambeeyaan uumi bax. Hawada waxay ku faaftaa dhinaca leeward, oo ah meesha ka soo horjeedka ee ay dabayshu ka timaado. Roobabka awgood, hawadu waxay lumisay ku dhowaad dhammaan qoyaankeedii waxayna bilaabaysaa inay kululaato. Xagga roobabka ku hadla af-duubku badanaa way hooseeyaan hawadana waxaa la sheegay inay ku jirto hooska roobka.
Meelaha ay roobabku ka dhacaan
Sidii aan horay u soo sheegnayba, roobka ororaxku wuxuu ku xiran yahay hadba halka uu ka curto. Adkeynta iyo sameysmadu waa doorsoomayaal kuxiran qaab-dhismeedka iyo cimilada goobta laga soo saaray. Meelaha adduunka qaarkood ayaa jecel Iyagu waa Jasiiradaha Hawaii iyo New Zealand waxaa loo yaqaanaa inay leeyihiin roobab badan oo afeed. Maskaxda ku hay in roobka badankiisa laga arko dhinacyada dabaysha. Qaybta dabayshu waa halka ay dabayshu ka timaado. Meelaha ka soo horjeedka sida caadiga ah waxaa lagu hayaa xoogaa qalalan
Roobka ororaafka ayaa dhaliya khilaafaad qaarkood. Tusaale ahaan, xeebaha waxay helayaan roob ka yar meelaha leh meelaha sare. Waa inaan maanka ku haynaa in bulshadu ay ku fidayso dhammaan meelaha aagga jilicsan ay yihiin kuwa ugu qalalan uguna saameynta badan. Kaliya maaha inay u soo deg degto si isku mid ah, waxay dhalisaa jawi qalalan oo liita. Hawaii waxay heshaa roobab kayar sanadkii sanadkii marka loo eego buuraha sare sida Wai'ale'ale ee Kaua'i.
Meel kale oo adduunka ka mid ah oo roobabku ay ku badan yihiin wuxuu ka socdaa buuraha Pennine ee woqooyiga England. Galbeedka silsiladda buurahan waxaa ku yaal Manchester oo ka roob badan Leeds. Magaaladani waxay ku taal bariga waxayna leedahay roob yar marka loo eego heerarka roobka ee hooseeya. Waad garan kartaa inay ku jirtay aagga harka roobka. Dhibaatada ka jirta roobka noocan ah ayaa ah in dhanka leexashada ay u janjeerto abaaro iyo carro aad u liidata.
Roobka ororaafka ahi wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa nooca, xoojinta iyo muddada roobka ee labada aag ee buurta. Waxaa jira daraasado qaarkood oo muujiyey in buuraha ay u dhaqmaan sidii caqabad dhul ah waxayna kuxirantahay heerka u janjeera iyo xawaaraha ay hawadu ku socoto, roobab badan ama ka yar baa da’in kara. Haddii jiirada buurtu ay tahay mid aad u dheer, waxay u badan tahay inay roob xoog leh ku di'i doonto buurta lafteeda oo hawad qalalan ay u timaaddo qaybta leeward. Dhinaca kale, buurta dhererkeedu sidoo kale wuu khuseeyaa. Buuraha yar yar waxay ka dhigan yihiin in aaga leeward uusan dhib badan ka soo gaarin abaaraha maadaama roobabku aysan gebi ahaanba ka soo bixin buurta.
Ma jiraan wax la arko laakiin buuraha waaweyn sida Himalayas wuxuu keenaa aag liidata oo liita maaddaama roobabku dhammaadaan oo ay ka dhacaan silsiladda buuraha lafteeda oo uusan gaari doonin aagga kale. Sidaad ubogtay, roobka ororaxku wuxuu sifiican ugu faa'iideysan karaa ilaha wabiyada, inkasta oo ay sidoo kale dhalin karto dhibaatooyin qaarkood. Dhibaatooyinka ay ka mid yihiin jiididda jiingadaha, dhul go 'iwm. Iyo abaaro ku jira qaybta leeward.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto roobka kulaylka ah iyo muhiimada uu leeyahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Roob ororax ah
Dayax gacmeedyada Jupiter